CIN Khabar रेडियो विगत वर्तमान, अवसर र चुनौती
शोबिता रिसाल बुधबार, फागुन १, २०७५, १२:१७:००
चैतको महिना । स्कूलको वार्षिक परीक्षा सकेर बसेको, फुर्सदिलो समय, बिहानीको मौसम । पीँढीको खाटमा पल्टिएर रेडियो सुन्दै थिएँ । आमा आगनमा बसेर तोरी केलाउदै हुनुहुन्थ्यो । पोखरातिरको एउटा एफएम रेडियोबाट लोक गीतको कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको थियो । कार्यक्रम चलाउने महिला थिइन् तर नाम याद भएन । म ध्यानमग्न भएर सुनिरहेको थिएँ ।
आमाको ध्यान रेडियोमा भन्दा तोरीमा थियो सायद । त्यतिबेलै आमालाई भनेको थिएँ, ‘भोलिपर्सि म नि रेडियोमा बोल्ने मान्छे हुने हो नि ! आमा ।अरु कुरामा छिटै प्रतिक्रिया नजनाउने आमाले फ्याट्ट भन्नुभयो, ‘धत् छोरी मान्छे भएर पनि रेडियोमा बोल्छन् ? लौ, भर्खर बोलिरनी मान्छे नि छोरी नै हुन् । छोरीहरूले नसक्ने केही छैन आमा ।’
त्यतिबेला स्कूलमा रटेको छोराछोरी बराबरीको लामो रटान आमालाई सुनाएकी थिएँ । र सुनाएकी थिएँ एउटा अठोट, पढ्ने पत्रकारिता बोल्ने रेडियोमा ।
त्यसको झण्डै १५ वर्षपछि अहिले सम्झन्छु, हो त्यतिबेला रेडियोमा बोल्ने विषय बृहत् मुस्किल थियो । त्यो पनि म जस्तो गाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छेको लागि । अझ छोरी मान्छेको लागि । बिहानैदेखि मध्य रातसम्म रेडियोमा महिलाहरूको आवाज बजिरहँदा आमालाई त्यतिबेला लागेको हुँदो हो, ‘रेडियोमा बोल्ने छोरीहरू कहाँ बस्लान्, बस्ने कहाँ ? न रात, बिरात, न बिहान, यो त कसरी सम्भव होला र ?’
अक्सर मेरा मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिरहन्छन् । रिर्पोटिङका लागि समुदायमा पुग्दा भेटेजतिलाई सोध्छु, ‘रेडियो कत्तिको सुन्नुहुन्छ ?’ शेयरकाष्टले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ५१ प्रतिशतको घरमा रेडियो छ । उनीहरुले पक्कै रेडियो सुन्छन् । तर, रेडियो प्रसारणको सुरुवाती अवस्थाको जस्तो चार्म वा आकषर्ण कम भएको छ । लक्षित स्रोताहरू बढेका छन् ।
रेडियोमा पहिलेको जस्तो स्वाद छैन भन्ने पो सुनिन्छ किन होला ? यसो हुनुमा राम्रा रेडियो कार्यक्रमहरूको कमि हुनु पनि हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १, २०७५, १२:१७:००